Indlu yeRustic kufuphi nePaki yeSizwe - I-Airbnb
Indlu yeRustic kufuphi nePaki yeSizwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguPablo
I-DISCOUNT 7 UBUSUKU OKANYE NGAPHEZULU 20%, INYANGA YONKE 47% !!!
Indlu yeRustic, eyenziwe ngamatye kunye namaplanga. Yindawo yokuhlala kwidolophu encinci, iBraojos, i-1.200 yeemitha ukuphakama, kwiiNtaba eziMbindi zaseSpain. Indlu ijikelezwe ziintaba kunye namahlathi, imizuzu engama-50 ukusuka kwisixeko saseMadrid
Yindlu ye-rustic esandula ukulungiswa, ezimeleyo, yonke imithi kunye nelitye, kwilali encinci yeentaba. Iindonga zayo ezibanzi zamatye ziyenza iphole ehlotyeni, ebusika igcina kakuhle kakhulu ubushushu bokufudumala kunye nesitovu seenkuni (umlilo uyabonakala).
Ungayipaka kwindawo yokungena kwaye wothule imithwalo ngokukhululeka. Ekungeneni kukho ipatio enkulu, kunye nomgangatho wamatye, oqokelelweyo kunye nelanga, kunye netafile, i-ambulera kunye nezihlalo zakho.
Ngokusebenzisa i-patio ungangena kumgangatho ophantsi we-haystack, isilingi kunye nomgangatho wokhuni, i-wardrobe enesibuko, iidrowa kunye nesifuba se-drawers yezinto zakho. Ibhedi ephindwe kabini inkulu, inomandlalo olunge kakhulu kunye needuvethi zendalo zokulala kakuhle. Yindawo ezolileyo kakhulu, kungekho ngxolo yangaphandle. Ngokuchasene nayo inendawo yokuhlambela encinci eneshawa, nayo yonke into oyifunayo (iitawuli, ishampu, njl.).
Unokufikelela kumgangatho ophezulu ngezinyuko okanye ngokuthe ngqo ngomnye umnyango osuka kwisitalato. Lo mgangatho nawo unomgangatho weplanga kunye nesilingi kunye neendonga ezibonwa ngamatye. Inemiqolo emibini yeefestile kunye nezibane zesibhakabhaka ukuze ukwazi ukonwabela imbonakalo yesibhakabhaka kunye nenkangeleko yomhlaba ngamaxesha onke. Inekhitshi ene-ceramic hob, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya kunye nezixhobo. Kukho itafile enezitulo, ibhedi yesofa kunye nesitovu seenkuni. Ukwanayo nebalcony enkulu, efulelwe ngamaplanga, ijonge emazantsi, kunye netafile, izitulo kunye neembono ezintle kakhulu. Akukho TV.
Umoya ococekileyo, ukuzola. Ukupaka okulula. Ilali ijikelezwe ngamadlelo kunye neenduli ezineedehesa ze-oki kunye nemithi yothuthu; Kunye namahlathi ompayina anemithi yeholly neyew. Uneendlela ezininzi zokuhamba, iindlela zokuhamba ngeebhayisikili zeentaba, ukukhwela ihashe okanye ukukhwela idonki. I-Paragliding, i-canoeing, ukunyuka ... Kwakhona imidlalo yasebusika (i-skiing, i-snowshoeing, i-sledding, njl.). Ehlotyeni kukho iindawo zokuhlambela zendalo ukuze ujabulele. Ndwendwela iPaki yeSizwe yaseGuadarrama, iRincón Biosphere Reserve kunye namahlathi ebhich ekufutshane, ibhirch kunye neholm oak. Sixelele into ofuna ukuyenza kwaye siya kukucebisa okona kulungileyo!
Ndifumaneka yonke imihla kuwe, ngokobuqu okanye ngefowuni
Kodwa ndixolele kuba andikwazi ukuthetha kakuhle ngesiNgesi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Braojos